सर्वाधिक अन्तर्राष्ट्रिय गोलकर्ताको दौडमा रोनाल्डो :: Setopati
सर्वाधिक अन्तर्राष्ट्रिय गोलकर्ताको दौडमा रोनाल्डो
सुगत पराजुली काठमाडौं, असोज ५
गोल गर्ने कला र क्षमता भएका खेलाडीको नाम फुटबलमा सधैं विशेष हुन्छ।
विशेष क्षमता भएकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा सर्वाधिक गोलकर्ताको रेकर्ड इरानका अलि दाईको नाममा छ। उनले आफ्नो देशका लागि जम्मा १ सय ८ गोल गरेका थिए।
उनलाई पोर्चुगलका स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डोले पछ्याइरहेका छन्। रोनाल्डोले हालै अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा सय गोलको रेकर्ड बनाए।
रोनाल्डोको सयौं अन्तर्राष्ट्रिय गोल फितलो वा अन्य बेला जस्तै तीन यार्डभित्र प्राप्त पासलाई टच गरेर अर्थात् फुटबलको प्रचलित भाषामा भन्दा 'ट्याप इन' होस् भनेर उनका प्रशंसक र समर्थकहरुले चाहेका थिएनन्। तर कतिपयको अनुमान त्यस्तै त हुने हो कि भन्ने पनि थियो।
सयौं गोल पनि ट्याप इनबाट हुनेवाला छ भन्ने अनुमानलाई गलत सावित गर्दै पोर्चुगिज कप्तानले स्विडेनविरुद्धको खेलमा फ्रिकिकलाई लोभलाग्दो ढंगले जाली चुमाए। जससँगै उनले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा सय गोलको कोशेढुंगा पार गरे। सोही खेलमा अर्को गोल गर्दा उनको अन्तर्राष्ट्रिय गोल संख्या १०१ पुग्यो।
हाल इटालीको युभेन्ट्सबाट व्यवसायिक फुटबल खेल्ने उनी अब आउने फेब्रुअरीमा ३६ वर्षका हुनेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय गोलका लागि पुरुषतर्फको विश्व रेकर्ड बराबर गर्न उनी इरानका अलि दाई भन्दा अब मात्र ७ गोल टाढा छन्। इरानको अलि दाईले राखेको रेकर्ड तोड्न रोनाल्डोले यस्तै उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै गएमा त्यो दिन धेरै टाढा छैन।
यदि यो विश्व रेकर्डलाई तोडेर रोनाल्डो अघि बढेको खण्डमा भविष्यमा उनको रेकर्ड समेत तोडिन सक्ने सम्भावना छ वा छैन? अर्थात् रोनाल्डोले संन्यास लिदाको दिनसम्मको रेकर्डलाई कसैले भेट्टाउन सक्ने अवस्था छ वा छैन?
भारतका ३६ वर्षे सुनील क्षेत्री अन्तर्राष्ट्रिय गोल रेकर्डमा ७२ गोलका साथ तेस्रो स्थानमा छन्। उनको बढ्दो उमेर र टिममा नवप्रवेशीहरूले अवसर र प्राथमिकता पाउँदै गरेको सन्दर्भ तथा गोल अन्तर पनि अलि बढी नै भएको कारण अली दाईकै रेकर्ड बराबर गर्न पनि उनलाई त्यति सहज भने हुने छैन।
अहिलेको अनुमान हेर्दा रोनाल्डो अलि दाईभन्दा अगाडि बढ्ने निश्चित जस्तो देखिन्छ।
लिओनल मेसीले ७० गोल तथा रोबर्ट लेवान्डोस्की पनि ६१ गोलका साथ रोनाल्डोलाई पछ्याउँदै छन्। मेसी र लेवान्डोस्कीको पनि उमेर उकालो लाग्दैछ।
सहकर्मीको समिकरण र सहयोग निरन्तर पाए भने गोल मेसिनको हैसियत राख्ने यी दुई खेलाडीले जे पनि गर्न सक्छन्। तर निरन्तर अगाडि बढि रहेका रोनाल्डोलाई उछिन्न भने कठिन नै पर्ला।
दुवैको हकमा पनि गोल अन्तर र उमेर विशेष बाधक बन्दै जाने कुरालाई भने नकार्न सक्ने अवस्था छैन।
यस्तै २८ वर्षका नेमार ६१ गोल गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय गोलकर्तामध्ये कम उमेरका हाल सक्रिय खेलाडी हुन्। रोनाल्डाले फुटबलबाट अवकाश लिने दिनसम्म बनाउने रेकर्डलाई तोड्न नेमारले लामो समयसम्म आफ्नो रफ्तारलाइ कायमै राख्नु पर्नेहुन्छ।
यहाँ एउटा विचारणीय कुरा के छ भने फुटबलको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा कुनै भौगोलिक क्षेत्रका खेलाडीले कस्ता प्रतिद्वन्दीबीच, कस्तो प्रकारको खेल खेलेर धेरै गोल गरेका हुन् भन्ने कुराले चाहिँ फरक पर्छ।
यसअर्थमा युरोपका प्राय: सबै फुटबल खेल्ने देशहरूको खेल शैली उस्तै उस्तै छ। तर युरोपमा पनि सधैँ बढि गोल अन्तरले हार्ने मुलुकहरु पनि छन्। दक्षिण अमेरिकी फुटबलमा पनि प्राय: उस्तै नै प्रतिद्वन्द्वी रहेको पाइन्छ। तर एसियन, कान्काफ मुलुकका देशहरूको अवस्थालाई हेर्दा फुटबललाइ क्रेजको रुपमा लिने मुलुकको खेल राम्रो छ तर अविकसित र लगानी गर्न नसक्ने देशको खेल अत्यन्त फितलो छ।
एसियाको हकमा पनि लगभग शतप्रतिशत नभएपनि उस्तैउस्तै अवस्था छ। यसैले समानस्तर र हैसियत भएका मुलुकभन्दा असमान र कमजोर टिममाथि खेल्न मौका पाउने देशका खेलाडीको गोल संख्याका हिसाबले पनि बढि हुन सक्छ।
भारतका सुनील क्षेत्री अथवा इरानको अलि दाईले एसियाका अत्यन्त्य कमजोर मुलुकसँग बनाएको रेकर्डलाई युरोप र दक्षिण अमेरिकी मुलुकका खेलाडीले कडा परिश्रमका साथ खेली बनाएको रेकर्डसँग तुलना गर्नु आफैंमा तर्कसंगत छैन।
रोनाल्डोले ३० वर्षको उमेर भन्दा अघि नै आफ्नो देशको लागि ११८ खेलमा ५२ गोल गर्न सफल भएका थिए। त्यसबेला उनको गोल औषत ०.४४ थियो। ३० वर्ष पछि सुस्ताउछन् कि भनिएका रोनाल्डोले आफ्नो गोल औषतलाई झनै बढाएर १.०४ बनाएका छन्। त्यसबीचमा उनले पोर्चुगलका लागि ४७ खेलमा ४९ गोल गरेका छन्। यो निकै आश्चर्यजनक तथ्य हो।
रोनाल्डोका समकालिन प्रतिस्पर्धी मेसीको कुरा गर्ने हो भने उनले बार्सिलोनामा पाएको सफलता जस्तो अर्जेन्टिनाबाट खेल्दा सफलता पाएका छैनन्। उनको पोल्टामा अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि शून्य छ।
अर्जेन्टिनाको जर्सी लगाएर खेल्दा उनको देश अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको फाइनलमा पुगेको भए पनि उपाधि हात पार्न भने सकेका छैन। यस्तै निरासाको कारणले हो वा अन्य कारणले हो एक समय अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट मेसीले संन्यास पनि लिएका थिए।
रोनाल्डोले रियल मड्रिड, म्यानचेस्टर युनाइटेड र युभेन्टसबाट खेल्दा उपाधि हात पार्नुका साथै आफ्नो देश पोर्चुगलको हकमा समेत उपाधि जिताउने कार्यलाई निरन्तरता दिएका छन्। उनी सम्मिलित पोर्चुगलको पोल्टामा एक युरोपेली च्याम्पियनसिप र नेसन्स लिग पनि जितेको रेकर्ड छ।
वर्तमान अवस्थामा पनि रोनाल्डो उम्दा खेलाडी हुन्। उनको रेकर्डलाई भेट्टाउन कडै मिहिनेत लाग्ने देखिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा उनले एक सयौं गोल पुर्‍याउने क्रममा ६ वटा ह्याट्रिक गरेका छन्। घरेलु मैदानमा ४७ गोल गरेका उनले अवे खेलमा ३९ गोल गरेका छन्। त्यस्तै १५ गोल भने न्यूट्रल मैदानमा गरेका हुन्। उनको बायाँ खुट्टा बाट २२ गोल तथा दायाँ खुट्टाबाट ५५ गोल भएको थियो भने टाउकोको साहाराले २४ पटक गोलपोस्ट चुमेको थियो।
उनी जस्ता मिहिनेती र प्रतिभाशाली खेलाडी दुर्लभ रुपमा पाइन्छ। ३५ वर्षको उमेरमा पनि आफूलाई उत्तिकै फिट राखेर मैदानमा डिफेन्डरलाई हायलकायल गराउन उनी माहिर छन्।
उमेर समेतको कारणले अब फुटबल खेलमा थोरै समयमात्र देख्न पाइने यी अद्भूत खेलाडीको गोल गर्ने रफ्तार अरु दुईचार वर्ष कायम रहेमा पनि सम्भवत: उनको अन्तर्राष्ट्रिय गोलको रेकर्ड तोड्न अझै बढी समय लाग्ने हुन्छ।
निकट भविष्यमा अली दाईको रेकर्डलाई तोड्न आँटिरहेका प्रतिभाशाली रोनाल्डोलाई सर्वाधिक अन्तर्राष्ट्रिय गोलकर्ताको लागि अग्रिम बधाई दिएमा कुनै फरक पर्दैन।
सुगत पराजुलीका लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
एट्लेटिको म्याड्रिडमाथि साविक विजेता वायर्नको सानदार जित
म्यानचेस्टर सिटीको पुनरागमन, लिभरपुलको संघर्षपूर्ण जित
च्याम्पियन्स लिगको पहिलो खेलमै रियल म्याड्रिड पराजित
पिएसजीलाई म्यानचेस्टर युनाइटेडले हरायो, चेल्सी र सेभिया बराबरीमा
मोराटाको दुई गोलमा युभेन्ट्सको जित